Icandelo likaSony elishiyayo lishiye uninzi lweemarike zehlabathi | I-Androidsis
USony ebetsala nzima kwimarike ye-smartphone kule minyaka imbalwa idlulileyo kwaye urekhodile Ilahleko ngaphezulu kweekota ezininzi. Ngo-Epreli kunyaka ophelileyo, uKenichiro Yoshida uthathe isikhundla sokuba yi-CEO ye-Sony kwaye watyhila Isicwangciso seminyaka emithathu kwinkampani echaza ukuba inkampani iyashenxisa kude kwizixhobo zokuvelisa.
Ngoku, ekuhambeni okubonakala ngathi kuyahambelana nesicwangciso, Icandelo likaSony elirhuqwayo lihoxile kuninzi lweemarike ze-smartphone kwihlabathi liphela. Esona sizathu siphambili soku kukholelwa ekubeni yinkampani ijolise ekuphawuleni nasekuzuzeni.
Eli nyathelo, elilandela emva kweNtlanganiso yeQhinga leQhinga le-FY2019, kukholelwa ukuba liyinxalenye yesicwangciso sethuba elifutshane nge-31 ka-Matshi 2019 kwaye ijolise ekuncedeni inkampani ukunciphisa iindleko zokusebenza ukubuyisa inzuzo, yazisa IiNtloko ze-Android.
Ngokwengxelo, inkampani yaseJapan ijonge ukunciphisa iindleko zayo zokusebenza ubuncinci ngesiqingathaxa kuthelekiswa no-2017. Ngenxa yoko kuncitshiswa okungathethekiyo, ekuphela kwendawo ekugxilwe kuyo yenkampani ngoku iya kuba yiJapan, iTaiwan neHong Kong, eAsia, kunye neYurophu. I-United States kunye necandelo elisentla kwelizwekazi laseAsia ngoku zigutyungelwe kukwahlukana.
Kwangoko kulo nyaka, ngo-Matshi, u-Sony wayecwangcise ukudibanisa icandelo lokuhamba kunye namanye amacandelo, kubandakanya ikhamera, umabonwakude kunye nomsindo, ukuqhubeka nokuthumela izigidi ngeenzuzo, kunye ukwenze oko ngokusesikweni. Icandelo elitsha libizwa ngokuba 'ziiMveliso ze-Elektroniki kunye nezisombululo' kwaye kufanele ukuba neziphumo zotshintshiselwano lobuchwephesha phakathi kweemveliso ezizayo.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, kwaxelwa ukuba Icandelo lefoni enkulu yaseJapan liza kubeka isiqingatha sabasebenzi kwisithuba sonyaka. I-Sony Xperia, enabasebenzi abangama-4.000, iya kuncitshiswa iye kubasebenzi abangama-2.000 2020 ukusukela ngoku kude kube ngoMatshi XNUMX.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ilahleko azizinzanga: Ukwahlulwa kweselfowuni kukaSony kushiye ngokusemthethweni intengiso yehlabathi